သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေး | November 2019
Utorrent တစ်ဦးလက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကဘယ်လို Windows ကို reinstall?
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု November 12,2019
သင့် browser ၌သင်တို့၏ cache နဲ့ cookies တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အတော်များများကအတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများကိုအချို့သောအခက်အခဲများသင့် browser ၌သင်တို့၏ cache နဲ့ cookies တွေကိုရှင်းလင်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောလွယ်ကူသောအလုပ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုဥပမာအားလုံး adware ဖယ်ရှားပစ်ရသည့်အခါလုပ်ဖို့အတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်သင်ဘရောက်ဇာရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သန့်ရှင်းသောသမိုင်းအရှိန်မြှင့်ချင်တယ်။ Chrome, Firefox, Opera က: အသုံးအများဆုံး browser များသုံးသူအပေါင်းတို့စဉ်းစားပါ။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုနှေးကွေးပါလျှင် ... ကြော်အဆိုပါ PC ကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်
နေ့သည်ကောင်းသော။ ငါကွန်ပျူတာနှောင့်နှေးဘယ်တော့မှကြသူ (အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ) ထိုသို့သောအသုံးပြုသူအဘယ်သူမျှမရှိကွောငျးပွောဆိုလြှငျ, ငါမှားမည်မဟုတ်ပါ! ကွန်ပျူတာအလုပ်လုပ်အဆင်ပြေ (နှင့်တခါတရံတွင်မဖြစ်နိုင်) ဖြစ်လာ - ဘယ်အချိန်မှာဒီမကြာခဏဖြစ်ပျက်မှစတင်ခဲ့သည်။ ရိုးရိုးသားသားဖြစ်စေရန်, ကွန်ပျူတာနှေးကွေးနိုငျသောကွောငျ့အရာ၏အကြောင်းရင်းများ - ရာပေါင်းများစွာနှင့်ကွန်ကရစ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ - ကအမြဲလွယ်ကူသည်မဟုတ်။
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာအတူတူ (သို့မဟုတ်အလားတူ) ပုံနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုရှာဖွေ disk ကိုနေရာလွတ်ကိုဘယ်လို
နေ့သည်ကောင်းသော။ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေကိုအများကြီးရှိသည်သောလူများ, ပုံများ, ဝေါလ်ပေပါသို့မဟုတ်ပဲထပ်ဖိုင်တွေများစွာဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျထင် (နှင့်နေဆဲအလားတူရာပေါင်းများစွာရှိ ... ) disc ကိုအပေါ်သိုလှောငျထား။ သူတို့တစ်တွေအလွန်လျောက်ပတ်ကြာနိုင်ပါတယ်တစ်ဦးကနေရာအရပ်! အလားတူပုံရိပ်တွေရှာဖွေသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုလျှင် - က (စုဆောင်းခြင်းအထင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လျှင်) အလုံအလောက်မဆိုအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။
ပွား (တူညီ) ဖိုင်တွေရှာတွေ့ဖို့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ကို
နေ့သည်ကောင်းသော။ inexorable အရာစာရင်းအင်းများ - လူအတော်များများဟာ hard drive တွေအပေါ်များမှာတစ်ခါတစ်ရံ (ဥပမာ, ပုံများ, သို့မဟုတ်ဂီတလမ်းကြောင်း) တူညီတဲ့ဖိုင်မိတ္တူများစွာရှိပါသည်။ ဤအမိတ္တူတစ်ခုချင်းစီ, သင်တန်း, အ hard drive ကိုပေါ်ရာအရပျကြာပါသည်။ သင့်ရဲ့ drive ကိုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လျှင်ကျြဆနျ "ပိတျဆို့နတေဲ့" - ထိုကဲ့သို့သောမိတ္တူအတော်လေးအများကြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်တကား!
Google Chrome ကိုအတွက် plugins ကို update လုပ်ဖို့ကဘယ်လို
HP က Probook 4540S များအတွက် Installing ယာဉ်မောင်း
တစ်ဦးကို Windows ကွန်ပျူတာပေါ်မှာက "ကို Safe Mode ကို" disable လုပ်နည်း
အီးမေးလ်က Mail.ru အားဖြင့် password recovery
ကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကိုတက်အပူလေ့ရှိပါတယ်။ အများစုကတော့, Processor ကိုနှင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အပူကွန်ပျူတာပျက်ကွက်သာဖြစ်ပေါ်စေသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသာအစားထိုးကိရိယာအစုံအတွက်ဖြေရှင်းနိုင်သည့်လေးနက်ပျက်စီးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ဒါဟာမှန်ကန်တဲ့အအေးကိုရွေးချယ်ဖို့နဲ့တစ်ခါတစ်ရံ GPU ကိုနှင့် CPU ကိုအပူချိန်စောင့်ကြည့်ဖို့ထို့ကြောင့်အရေးကြီးပါသည်။ ဆက်ဖတ်ရန်
အဆိုပါ Microsoft Word ကိုအစီအစဉ်ကို command ကိုလမျးညှနျအမှားဖြေရှင်းချက်
ကျနော်တို့လက်ပ်တော့နှင့်အတူက Wi-Fi ကိုဖြန့်ဝေ
https://termotools.com my.termotools.com © သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသန့်ရှင်းရေး 2019